Archive du 20180807
Hery Rajaonarimampianina Nampiesonin-dRatsirahonana…
Namadika an-dRajaonarimampianina tanteraka ve izany i Norbert Lala Ratsirahonana izay hita niseho vahoaka teny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahanetana Mahamasina nanotrona ny filohan’ny tetezamita teo aloha ny 01 aogositra teo?
Fanaratsiana kandida na fitenenana hoe “Fidio” Mampikatona haino aman-jery
Tsy azo atao ary mampikatona haino aman-jery ny manaratsy kandida na mampifidy kandida amin’ny haino aman-jery, araka ny lalàna navoakan’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI.
Vahoaka Malagasy Tezaina hifanaratsy
Tsy maintsy miditra amin’ny fanaratsiana ny hafa ve vao afaka manasongadin-tena ? Fanontaniana tsara apetraka io manoloana ny firongatr’ireo fifanaratsiana saika hita sy heno isan’andro amin’ny haino aman-jery sy tambajotra sosialy isan-karazany tato ho ato.
Fifidianana eto Madagasikara Azo antoka ny korontana hatreto
Tokony hampieritreritra tsara ny Malagasy ny zava-misy momba ny fifidianana any Zimbabwe, Mali amin’izao fotoana. Herisetra sy fifanolanana taorian’ny fivoahan’ny voka-pifidianana, izay voalaza fa lany tamin’ny isam-bato 50,8% ny kandidam-panjakana Emmerson Mnangagwa, izay nitondra ny tetezamita taorian’ny nanonganana an’i Robert Mugabe ny novambra 2017.
Minisiteran’ny paositra Niravona ny olana
Fotoana manan-tantara omaly alatsinainy 6 aogositra nahavitan’ny fifanaovan-tsonia handravonana ny olana sy ny disadisa teo anivon’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra na ny MPTDN nantsoina hoe “Fifanekena”, ka handray ny asany ny mpiasa.
Biraon’ny faritra ao Morondava Nodorana ?
May omaly alatsinainy 6 aogositra ny biraon'ny Faritra sy ny Prefektiora ao Morondava, izay renivohitry ny faritra Menabe. May kila forehitra tsy nisy azo noraisina intsony ny entana sy ny taratasim-panjakana.
Ady amin’ny kolikoly Ny finiavana mihitsy no tsy misy
Omaly alatsinainy 6 aogositra no natao teny amin’ny minisiteran’ny angovo sy ny akoran’afo ny fananganana tamin’ny fomba ofisialy ny faribolan’ny fanjakana tsara tantana.
Vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro Mahazo vahana indray ny kohoka sy ny sery
Niovaova be mihitsy ny toetr’andro teto amintsika tato ho ato. Ankoatra ny hatsiaka izay efa mahazatra isaky ny vanim-potoana tahaka izao dia tonga ihany koa ny hafanana izay efa mihoatra ny 25 °C ho antsika eto an-drenivohitra.
Vakansy lehibe Manomboka mihamaro ireo mankany amoron-tsiraka
Betsaka ireo efa mandeha mivoaka miala sasatra any amin’ny faritra ankehitriny. Ankoatra an’i Mahajanga dia tena be mpisafidy ihany koa i Toamasina.
ASIEF Famaranana tsipy kanetibe olo-3 miaraka Hotanterahina amin’ny faran’ny herinandro izao eny Ankatso
Ny famaranana amin’ny fifaninana Tsipy kanetibe rejionaly Asief Analamanga natokana hoan’ny olon-droa miaraka ihany no tontosa teny amin’ny “Boulodrôme Ankatso” ny sabotsy 04 aogositra 2018 teo ka nahitana ny fandresen’i Yves sy Mparany avy ao amin’ny Oniversite Ankatso an’i Toky sy Manitra 11-8 avy amin’ny Mesupres.
Amboara basikety « Tournoi Somaroho 2018 » Lasan’ny Ascb Boeny lehilahy sy Mb2All Analamanga vehivavy
Namarana ny hetsika “Festival Somaroho 2018” andiany faha-5 notontosaina tany Nosy-Be Hell Ville ny 1-5 aogositra teo ny lalao basikety “Tournoi Somaroho 2018”.
Volley Ball Analamanga Ireo tafavoaka hanao ankatoky ny famaranana
Fantatra tamin’ny vokatr’ireo lalao 1/4-dalana notontosaina ny sabotsy 4 sy alahady 5 aogositra
Navoakan’ny WTA omaly alatsinainy 6 aogositra 2018 ny filaharan’ireo mpilalao tenisy matihanina eran-tany izay tsy nahitana fiovana firy loatra amin’ny teo aloha fa mbola mitarika an’isa hatrany ilay kalaza avy any Roumania, Simona Halep.
Papelika sy voatango
Na ny fomba fiteny “misora-tena toa voatango” na “midoka tena toy ny papelika” dia entin’ny Ntaolo Malagasy nanaovana fanoharana ilazana ny olona mpirehareha.
Lalana Toamasina - Foulpointe Potika tanteraka
Fotoanan’ny fialantsasatra izao ka toerana anisan`ny maro mpankafy i Foulpointe. Potika tanteraka anefa io lalam-pirenena fahadimy io ankehitriny.
Fiatrehana ny fanadinana CEPE Manao ezaka mafy ny ankamaroan’ireo EPP
Hotanterahina amin’ny herin’ny anio talata 7 aogositra ny fanadinana CEPE ho an’ireo ankizy madinika ao amin’ny kilasy fahafito manerana ny Nosy.
Omby 900 lasan’ny dahalo Mitazam-potsiny ny fanjakana
Ny dahalo ve no fanjakana sa ny fanjakana no dahalo ? Izay no toreon’ireo mpandraharaha amin’ny sehatry ny omby manoloana ny asan-dahalo mirongatra amin’izao fotoana.
Kaominina IVATO Asa fa tsy kabary ny an’ny Ben’ny tanàna
Tratra ny telo volana hanamboarana ny tsena vaovao araka ny fanamby efa napetraky ny Ben’ny tanàna, voafidy tamin’ny anaran’ny Tiako I Madagasikara, Randrianarisoa Penjy. 20 andro izao no nanombohan’ny asa fanamboarana ary ny 35%-n’ny asa no efa vita.
Manampahefana mitango vola tsy ara-drariny Leo ny olona ao Tanambao Manampontsy
Betsaka loatra ny fakana vola tsy mazava ataon’ny delegem-panjakana sy ny dokoteram-biby amin’ny mpiompy omby ary tsy hanomezana taratasy famarinanam-bola (quittance ), hoy ny fitarainan’ny vahoaka any Tanambao Manampontsy.
Teratany vahiny Manomboka mandao tsimoramora an’i Madagasikara
Tsy fantatra intsony na fialantsasatra na tahotry ny korontana mety hitranga amin’ny fotoam-pifidianana fa toa nivoaka moramora ireo vahiny monina eto Madagasikara.